Amakhulu abantu abagonyelweyo ababhedlele ezibhedlele e-UK nge-Delta
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Amakhulu abantu abagonyelweyo ababhedlele ezibhedlele e-UK nge-Delta
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Iingcali zilumkisa ukuba 'izitofu zokugonya azisusi wonke umngcipheko' wokusasazeka kwe-Delta eyahlukileyo ngoku enepesenti ezingama-99 zazo zonke izifo ze-COVID-19 e-UK.
Kukho imiqondiso yokuqala yokuba i-jabs ayinakuyeka ukuhanjiswa kwe-Delta.
Zonke izitofu ezisetyenziswayo e-UK zifuna abafumanayo bafumane iidosi ezimbini zokugonyelwa ngokupheleleyo.
Malunga neepesenti ezingama-75 zabantu abadala base-UK bafumene izithonga ezibini ukuza kuthi ga ngoku.
Kuhlaziyo lwayo lwamva nje lwe-coronavirus, Impilo Yoluntu Yase-England (PHE) ulumkise malunga nokubonakaliswa kwangoko ukuba abantu abagonyiweyo banakho ukuhambisa i-Delta eyahlukileyo ye-COVID-19 ngokulula njengabo bangafumananga shoti.
Ngokwokukhutshwa kwe-PHE, amakhulu abantu abagonywe ngokupheleleyo e-UK baye balaliswa esibhedlele ngenxa ye-Delta COVID-19 eyahlukileyo.
Ukusukela nge-19 kaJulayi ukuya nge-2 ka-Agasti, i-55.1% yabantu abali-1,467 abalaliswe esibhedlele ngenxa ye-Delta babengagonywanga, i-PHE ithe, ngelixa i-34.9% - okanye abantu abangama-512- befumene idosi ezimbini.
Nge-19 kaJulayi yayingumhla apho izithintelo zokutshixwa kwezitshixo zancitshiswa kakhulu e-UK.
Zonke izitofu ezisetyenziswayo e-United Kingdom- ezo ziveliswa yi-AstraZeneca, iModerna kunye ne-Pfizer-BioNTech- zifuna ukuba abo bafumana ezi zigonyo bagonywe ngokupheleleyo.
"Njengokuba uninzi lwabantu lugonywa, siza kubona ipesenti ephezulu yokugonywa kwabantu esibhedlele," utshilo u-PHE.
UJenny Harries, umphathi oyintloko we-Arhente yoKhuseleko lwezeMpilo e-UK, uthe amanani esibhedlele abonise "kwakhona ukuba kubaluleke kangakanani ukuba sonke size ngaphambili sizokufumana zombini iidosi zokugonya ngokukhawuleza xa sikwazi ukwenza njalo".
UFeliksi Harrington uthi:
Agasti 10, 2021 kwi-14: 23
Amayeza ovavanyo ovavanyo lobukho be-COVID-19 awaniki mzimba okanye athintele nawuphina umntu ekubeni asuleleke, ayazibangela iziphumo ezibi ezibandakanya ukufa, kwaye eneneni inkqubo yomzimba yokuzikhusela ijonge ekuvezweni kwintsholongwane njengoko sibona. Kuphela ngabo bangakhange bajojwe ngayo nayiphi na kwezi zitofu zobuxoki banokuthi ngoku bafune ukhuseleko.
Agasti 8, 2021 kwi-06: 08
I-Nigrdom, ngaba ndilungile?
UGerard Wirth uthi:
Agasti 7, 2021 kwi-20: 41
Amanani ehlabathi awabaxhasi abantu abathathe i-Astra Zeneca… ezo ngxelo kufuneka zibonise amanani abo bathathe iyeza lokugonya ngalinye ngokwahlukeneyo nangomfanekiso ofundileyo.
NGOKU… .. ukugonywa akunako ukulahla lonke uqeqesho lwezinto ezichasayo ngaphandle kwefestile…. Kufuneka uqhubeke usebenzise imaski… .ukuba abantu bakutyelele nokuba bagonyiwe banxibe iimaski kwaye ngokuqinisekileyo bakuphephe ukusondela emzimbeni. Ingacaphukisa wonke umntu kodwa oku kuya kunceda. Elona ngcebiso lingcono kukungahambi kwindibano ezinkulu ezithile 'ezingaphantsi' ... zonxiba kwizithuthi zikawonkewonke .. .. eofisini okanye nisebenze ngokufanayo.
UPaul Hudson uthi:
Agasti 7, 2021 kwi-20: 00
Ewe kodwa liyintoni inani lokufa? Iyafuneka kumxholo. Ukuba abantu abagonyiweyo bayosuleleka kodwa ipesenti encinci iyafa okanye ifuna ukulaliswa esibhedlele, uCovid uya kufana ngaliphi na nomkhuhlane oqhelekileyo?